Ousmane Dembele oo ka fikiraya inuu beeca xorta ah ugu biiro koox weyn oo ka ciyaarta horyaalka Premier League – Gool FM
(Barcelona) 09 Dis 2021. Weeraryahanka Kooxda kubadda cagta Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa la soo warinayaa inuu iska diiday dalabyo uu ka helay tiro kooxo ah si uu beeca xorta ah uga mid noqdo naadiga Chelsea xagaaga soo aaddan.
Qandaraaska Weeraryahanka Faransiiska ah uu kula jiro Barcelona ayaa ku eg bisha June ee soo aaddan, taasoo la micno ah inuu wada-xaajood rasmi ah la bilaabi karo koox kasta oo ka dhisan meel ka baxsan dalka Spain billowga sanadka 2022.
Manchester United iyo Newcastle United ayaa sii waday xiisaha ay u qabaan ku guuleysataha Koobka Adduunka, halka Juventus ay sidoo kale aad u danaynayso inay kula wareegto beeca xorta ah.
Si kastaba ha noqotee, Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Chelsea uu maamulo macallin Thomas Tuchel ay ka caawin karto inuu Weeraryahankan u soo dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge.
Barcelona ayaa la soo warinayaa inay ka shaki qabto in Tuchel uu ka dambeeyo xiisaha kooxda reer London ay u muujinayso xiddigeeda, iyadoo macallinka Jarmalka uu Dembele ku soo layliyey Kooxda Borussia Dortmund intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2016-17, waxaana ka dhexeeya xiriir aad u xooggan.
24-sano jirkaan ayaa kaliya afar kulan u saftay Barca xilli ciyaareedkan 2021-22, isagoo dhaawac muruqa ah uu soo gaaray kaddib markii uu ka soo laabtay dhaawac jilibka ka soo gaaray oo uu muddo dheer la maqnaa.
Xiddiga PSG ee Georginio Wijnaldum oo Albaabada u furay ku soo laabashada horyaalka Premier League & Arsenal oo...